नेपालमा महका लागि प्रशिद्ध ठाउँ, एउटा गाउँमै यति धेरै मह उत्पादन « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
नेपालमा महका लागि प्रशिद्ध ठाउँ, एउटा गाउँमै यति धेरै मह उत्पादन
काठमाडौं । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–११ थाकलटारस्थित ग्रामीण बस्तीमा यो वर्ष ४२ टन मह उत्पादन भएको छ ।
जनजाति बाहुल्य यस बस्तीका ५७ घरपरिवारले व्यावसायिक मौरीपालन गर्दै आएको छ । थाकलटार मौरीपालन, तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका सचिव धर्मराज लामाका अनुसार एक परिवारले २० देखि तीन सय घारसम्म मौरी पालेका छन् ।
त्यहाँ चिउरीको मह उत्पादन हुने भएकाले डाबर नेपाल, पतञ्जलि र स्थानीय व्यवसायीले त्यहाँको मह उठाउने गर्दछन् । मौरी पालेसँगै धेरैको जीवनस्तर उकासिएको संस्थाका अध्यक्ष खड्गबहादुर मोक्तानले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ५० घार मौरी पाल्नेले वर्षमा रु दुईदेखि तीन लाख आम्दानी गर्ने गरेका छन् । कृषकलाई मौरी पाल्न विभिन्न संस्थाले सहयोगसमेत गर्दै आएका छन् । कृषकले यस वर्ष रु २५० प्रति किलोमा मह बिक्री गरेको जनाएका छन् ।
हालैमात्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण मौरी जोन, हरियो वन कार्यक्रम र डाबर नेपालको सहयोगमा गाउँमा मह सङ्कलन केन्द्रसमेत स्थापना गरिएको छ । केन्द्र भवन निर्माण गर्न मौरी जोनले रु १० लाख, हरियो वन कार्यक्रमले रु १० लाख १२ हजार र डाबर नेपालले रु दुई लाख ४० हजार सहयोग गरेका छन् ।
किसानको मह सङ्कलन गरेर सोही ठाउँमा राखिने अध्यक्ष मोक्तानले जानकारी दिनुभयो । विसं २०६० पछि स्थानीयवासीले त्यहाँ मौरी पाल्न शुरु गरेका हुन् । राप्ती नगरपालिकाका उपप्रमुख इमानसिंह लामाले स्थानीय मौरीपालनमा लागेपछि जीवनस्तरमा सुधार आएको जानकारी दिनुभयो। यसले ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर पस्नेहरुलाई रोकेको उहाँको भनाइ छ ।
मौरीबाट आम्दानी गर्न थालेपछि स्थानीय तरकारी र पशुपालनतर्फ पनि केन्द्रीत हुन थालेका छन् । मौरीपालक सङ्घ चितवनका अध्यक्ष रोशन पण्डितले जिल्लामा एक वर्षमा पाँच सयदेखि छ सय टनसम्म मह उत्पादन हुने बताउनुभयो ।
ग्रामीण बस्ती थाकलटार मौरीको पकेट क्षेत्र रहेको भन्दै उहाँले चिउरीको महका लागि सो क्षेत्र प्रख्यात रहेको जानकारी दिनुभयो ।
२०७६ असार १० गते प्रकाशित
नेपाल बैंकको लिखित परीक्षा तालिका सार्वजनिक (सूचनासहित)
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्ना विभिन्न विज्ञापन, तह एवं पदका लागि लोकसेवा आयोगले लिने
यस्तो छ उपनिर्वाचनको कार्यतालिका
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिरमा १४ मा हुने उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न
१९ अर्ब ६६ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्दै यी कम्पनी, कसको कति ? (सूचिसहित)
काठमाडौं । विभिन्न २९ कम्पनीहरुले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएका छन । पूर्वाधार बैंक,
नेप्सेमा सुचीकृत यी ८२ कम्पनीको कारोबार रोक्का (सूचि सहित)
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ८२ कम्पनीको शेयर कारोबर रोक्का गरेको छ । नेप्सेमा सुचीकृत
बैंकका कर्मचारीको तलब फेरि बढ्न थाल्यो, कुन पदको कति ?
एनआरएनए अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी, मतदातालाई दिए धन्यवाद
फेरि सार्वजनिक भयो अधिकृत तहको नतिजा (नाम सहित)
शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सूचना
बाल विकास र निजीस्रोत शिक्षकलाई एकमुष्ट प्रोत्साहन भत्ता दिने
अबदेखि एनआरएनएको चुनाव नेपालमा गर्दैनौँ : कुमार पन्त
हेर्नुहोस सूचना : भर्खरै खुलायो लोकसेवाले ठुलो संख्यामा विज्ञापन
एनआरएनए नयाँ नेतृत्वका लागि कुमार पन्तको प्यानलै जित नजिक
गृह मन्त्रालयले गर्यो सिडिओको सरुवा, हेर्नुहोस् ! को कहाँ ?
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडियो)को सरुवा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले